Bit By Bit - Mass ပူးပေါင်း - 5.4.3 နိဂုံး
ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းဖြစ်နိုင်သည်နှင့်, အနာဂတ်၌ဖွယ်ရှိနည်းပညာနှင့် passive ပါဝင်မှုပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
eBird ပြသည့်အတိုင်းဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် PhotoCity နမူနာနှင့်အချက်အလက်အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများအလားအလာ solvable ဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။
ဘယ်လိုလူမှုရေးသုတေသနအတွက်ဒေတာစုဆောင်းအလုပ်ဖြန့်ဝေနိုငျသလဲ တစ်ဦးကအံ့သြဖွယ်ဥပမာမာလာဝီဂျာနယ်များစီမံကိန်းအပေါ်ဆူ Watkins နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏လုပျငနျးမှလာ (Watkins and Swidler 2009; Kaler, Watkins, and Angotti 2015) ။ ဤစီမံကိန်းများတွင်, 22 ဒေသခံများခေါ်မှတျတမျးတငျထားသော "စကားပြောဆိုမှုဂျာနယ်များ" -kept "ဂျာနယ်လစ်" အသေးစိတ်, သူတို့ကသာမန်ပြည်သူတွေ၏နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၌အေအိုင်ဒီအက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တမဲ့ကြားစကားဝိုင်းများ (အချိန်မှာစီမံကိန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏အကြောင်း 15% ကိုစတင် မာလာဝီထဲမှာ HIV ပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရ (Bello, Chipeta, and Aberle-Grasse 2006) ) ။ သောကြောင့်သူတို့ရဲ့အတွင်းအဆင့်အတန်း၏, ထိုသတင်းစာဆရာများငါသည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းစီမံကိန်းကိုဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုအကွံဉာဏျပူဇျောသောအခါ (ငါအကြာတွင်အခန်း၌ဤ၏ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်လိမ့်မယ်ဆူ Watkins နှင့်သူမ၏အနောက်တိုင်းသုတေသနများပူးပေါင်းမှတပိုင်တနိုင်ခဲ့ကြအံ့သောငှါစကားပြောဆိုချက် overhear နိုငျခဲ့ကွ ) ။ ထိုမာလာဝီဂျာနယ်များစီမံကိန်းအနေဖြင့်ဒေတာများအရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရေအတွက်ကဦးဆောင်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းကိုစတင်မီကဥပမာ, အများအပြားအပြင်ဆာဟာရသဲကန္တာရတောင်ပိုင်းအာဖရိကမှာ AIDS ရောဂါနှင့် ပတ်သက်. တိတ်ဆိတ်ရှိကွောငျးကိုယုံပေမယ့်ဂျာနယ်တွေကဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမှုမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြ: စာနယ်ဇင်းသမားများအသုဘအဖြစ်မတူကွဲပြားနေရာ, ခေါင်းစဉ်အပေါ်စကားလက်ဆုံရာပေါင်းများစွာကွား , အရက်ဆိုင်များနှင့်အသင်းတော်များ။ ထို့ပြင်ဤစကားဝိုင်းများ၏သဘောသဘာဝသုတေသီများပိုကောင်းကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုမှခုခံအချို့ကိုနားလည် စ. , ကွန်ဒုံးအသုံးအများပြည်သူကျန်းမာရေးကိုမက်ဆေ့ခ်ျထဲမှာရှုမြင်သုံးသပ်ကြသောနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့နေ့စဉ်အသက်တာ၌ဆွေးနွေးခဲ့ကြသောလမ်းနှင့်အတူကိုက်ညီမှုမရှိခဲ့ (Tavory and Swidler 2009) ။
ဟုတ်ပါတယ်, eBird ကနေဒေတာနဲ့တူခြင်း, မာလာဝီဂျာနယ်များစီမံကိန်းအနေဖြင့်အချက်အလက်များ, Watkins နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြသည့်ကိစ္စကိုမစုံလဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, မှတျတမျးတငျထားပြောဆိုမှုများအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှပြောဆိုမှုများတစ်ဦးကိုကျပန်းနမူနာမဟုတ်။ ယင်းအစားသူတို့ AIDS ရောဂါအကြောင်းစကားစမြည်တစ်ခုမပြည့်စုံသန်းခေါင်စာရင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒေတာအရည်အသွေးမြင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သုတေသီဂျာနယ်များအတွင်းနှင့်ဂျာနယ်များဖြတ်ပြီးကိုက်ညီမှုများကသက်သေအဖြစ်သူတို့ရဲ့သတင်းထောက်တွေ, အရည်အသွေးမြင့်ကသတင်းထောက်များကိုခဲ့ကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ လုံလောက်တဲ့ဂျာနယ်လစ်သေးငယ်တဲ့လုံလောက်တဲ့ setting ကိုအတွက်တပ်ဖြန့်နှင့်အစီရင်ခံစာများကိုတိကျတဲ့အကြောင်းအရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြသောအခါနောက်ထပ်, redundancy ဒေတာအရည်အသွေးယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးပွားစေတော်မူသော, ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဥပမာ, "Stella" အမည်ရှိလိင်အလုပ်သမားလေးကွဲပြားခြားနားသောဂျာနယ်လစ်များ၏ဂျာနယ်များအတွက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတက်ပြသ (Watkins and Swidler 2009) ။ ဒါကြောင့် PhotoCity အတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့, redundancy ၏အသုံးပြုမှုကိုဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းများအတွက် data တွေကိုအရည်အသွေးမြင့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သေချာများအတွက်အရေးပါသောနိယာမဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဇယား 5.3 လူမှုရေးသုတေသနအတွက်ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်း၏အခြားဥပမာကိုပြသထားတယ်။
စားပွဲတင် 5.3: လူမှုရေးသုတေသနတွင်ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းများဥပမာများ။
မာလာဝီတွင် HIV / AIDS ရောဂါနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးချက်တွေ Watkins and Swidler (2009) ; Kaler, Watkins, and Angotti (2015)
နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှု Blumenstock, Keleher, and Reisinger (2016)
ဒီအခန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဥပမာအားလုံးတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြ: စာနယ်ဇင်းသမားများသူတို့ကြားသောစကားပြောဆိုချက်တွေကိုကူးရေးသော; birders သူတို့ရဲ့ Bird စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအပ်လုဒ်လုပ်ထား; သို့မဟုတ်ကစားသမားတွေ၎င်းတို့၏ဓာတ်ပုံများကူးတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ပါဝင်မှုအလိုအလျှောက်ကြီးနှင့်တင်ပြရန်မဆိုတိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အချိန်မလိုအပ်ခဲ့သနည်းအဘယ်သို့လျှင် ဤ "ပါဝင်ဆောင်ရွက် sensing" သို့မဟုတ်ကကမ်းလှမ်းဟူသောဂတိတော်သည် "လူဗဟိုပြု sensing ။ " ဥပမာ, Pothole ကင်းလှည့်, မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်တစ်ဦးစီမံကိန်းဘော်စတွန်ဧရိယာ၌ခုနစ်တက္ကစီ cabs အတွင်း၌ accelerometer တပ်ဆင်ထားတဲ့ GPS စနစ်တပ်ဆင်ထား (Eriksson et al. 2008) ။ တစ်ဦး pothole ကျော်မောင်းနှင်တစ်ဦးကွဲပြား accelerometer signal ကိုအရွက်သောကြောင့်တက္ကစီရွေ့လျား၏အတွင်းပိုင်းနေရာချသောအခါ, ထိုကိရိယာများ, ဘော်စတွန်၏ pothole မြေပုံဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, တက္ကစီကျပန်းလမ်းများအမြည်း, ဒါပေမယ့်လုံလောက်တဲ့တက္ကစီမပေးပါဘူး, သူတို့မြို့၏ကြီးမားသောဝေမျှအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုလုံလောက်သောလွှမ်းခြုံရှိပေမည်။ သူတို့က de-ကျွမ်းကျင်မှုဒေတာကူညီထောက်ပံ့၏ဖြစ်စဉ်ကြောင့်နည်းပညာကိုမှီခိုအားက passive စနစ်များ၏ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်: က eBird (သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောငှက်မျိုးစိတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်သောကွောငျ့) ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်နေချိန်မှာ, ကမှမကအထူးကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ပါတယ် Pothole ကင်းလှည့်ရန်ကူညီသည်။
ရှေ့ဆက် Going ငါအများကြီးဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းများပြီးသားကမ္ဘာတဝှမ်းကလူဘီလီယံအားဖြင့်သယ်ဆောင်သောမိုဘိုင်းဖုန်းများ၏စွမ်းရည်များ၏အသုံးအောင်ကိုစတင်လိမ့်မည်ဟုသံသယ။ ဤရွေ့ကားဖုန်းများပြီးသားထိုကဲ့သို့သောမိုက်ခရိုဖုန်း, ကင်မရာ, GPS စနစ် devices များနှင့်နာရီအဖြစ်တိုင်းတာခြင်းများအတွက်အရေးကြီးသောအာရုံခံကိရိယာ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ရှိသည်။ နောက်ထပ်အဲဒီမိုဘိုင်းဖုန်းများသုတေသီများအခြေခံအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း protocols များကျော်အချို့သောထိန်းချုပ်မှုအားဖွင့်တဲ့ third-party apps များထောက်ခံခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့အဲဒီဖုန်းများ off-load သူတို့စုဆောင်းကိုဒေတာမှသူတို့အဘို့အဖြစ်နိုင်အောင်, အင်တာနက်-ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ အဲဒီမှာတိအာရုံခံကိရိယာကနေကန့်သတ်ဘက်ထရီသက်တမ်းမှမြောက်မြားစွာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများသော်လည်း, နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်ဒီပြဿနာတွေကိုဖွယ်ရှိအချိန်ကျော်လျော့နည်းစေမည်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကျင့်ဝတ်နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပိုရှုပ်ထွေးရစေခြင်းငှါ,; ငါသည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုအကွံဉာဏျပူဇျောသောအခါငါကျင့်ဝတ်၏မေးခွန်းများကိုထံသို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းများတွင်, စေတနာ့ဝန်ထမ်းကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြောင်းဒေတာအထောက်အကူဖြစ်စေ။ ဒီချဉ်းကပ်မှုပြီးသားကိုအောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့ပြီး, နှင့်အနာဂတ်အသုံးပြုမှုဖွယ်ရှိနမူနာနှင့်အချက်အလက်အရည်အသွေးပြည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေရှင်းရန်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ထိုကဲ့သို့သော PhotoCity နှင့် Pothole ကင်းလှည့်အဖြစ်လက်ရှိစီမံကိန်းများကိုဒီပြဿနာတွေကိုအဖြေရှာအကြံပေးချင်ပါတယ်။ ပိုပြီးစီမံကိန်းများကိုကျွမ်းကျင်-de နှင့် passive ပါဝင်မှုနိုင်ပါတယ်ကြောင်းနည်းပညာ၏အားသာချက်ယူသကဲ့သို့, ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းများသိသိသာသာရိုးရိုးအတိတ်ကာလကန့်သတ်ပိတ်ထားခဲ့ကြောင်းဒေတာစုဆောင်းဖို့သုတေသီများ enable လုပ်ထားခြင်း, စကေးတိုးပွါးသင့်သည်။